18 Yesu kaa eyinom wiei no, ɔne n’asuafo no fii adi kotwaa Kidron subon+ no kɔɔ turo bi mu.+ 2 Na Yuda a obeyi no ama no nso nim hɔ, efisɛ na Yesu ne n’asuafo no akohyia hɔ mpɛn pii.+ 3 Enti Yuda de asraafokuw ne awɛmfo a wofi asɔfo mpanyin ne Farisifo no nkyɛn no baa hɔ a wokurakura agyatɛn ne akanea ne akode.+ 4 Afei esiane sɛ na Yesu nim nea ɛreba no so nyinaa nti,+ ɔbae bɛka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Hena na morehwehwɛ no?” 5 Wobuaa no sɛ: “Yesu, Nasareni+ no.” Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mene no.” Saa bere no na Yuda a obeyi no ama+ no nso ne wɔn na egyina hɔ. 6 Nanso bere a ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mene no” no, wopimpinii+ wɔn akyi na wɔhwehwee fam. 7 Enti obisaa wɔn bio sɛ: “Hena na morehwehwɛ no?” Wɔkae sɛ: “Yesu Nasareni no.” 8 Yesu buae sɛ: “Maka akyerɛ mo sɛ mene no. Enti sɛ me na morehwehwɛ me a, momma eyinom nkɔ”; 9 na ɛbɛma asɛm a ɔkae no aba mu sɛ: “Wɔn a wode wɔn ama me no, memmaa wɔn mu biako mpo nyerae.”+ 10 Ɛnna Simon Petro twee nkrante a ɛhyɛ ne ho no de twaa ɔsɔfo panyin no akoa aso nifa fii hɔ.+ Na akoa no din de Malko. 11 Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ Petro sɛ: “Fa nkrante no hyɛ ne boha mu.+ Kuruwa a Agya no de ama me no, ɛnsɛ sɛ ɔkwan biara so menom+ anaa?” 12 Afei asraafokuw no ne ɔsahene ne Yudafo awɛmfo no soo Yesu mu kyekyeree no, 13 na wodii kan de no kɔɔ Anas hɔ; ná ɔyɛ Kaiafa a ɔyɛ ɔsɔfo panyin saa afe no,+ ase. 14 Nokwasɛm ne sɛ, ɛyɛ Kaiafa na otuu Yudafo no fo sɛ eye ma wɔn sɛ onipa biako bewu ama ɔman no.+ 15 Saa bere no na Simon Petro ne osuani foforo di Yesu akyi.+ Saa osuani no yɛ obi a na ɔsɔfo panyin no nim no, na ɔne Yesu kɔɔ ɔsɔfo panyin no adiwo hɔ, 16 nanso na Petro gyina abɔnten pon no akyi.+ Ɛnna osuani a ɔsɔfo panyin no nim no no fii adi ne ɔpon ano hwɛfo no kɔkasae, na ɔde Petro baa mu. 17 Afei abaawa a ɔhwɛ ɔpon no ano no ka kyerɛɛ Petro sɛ: “Wo nso woka onipa yi asuafo no ho, ɛnte saa?” Ɔkae sɛ: “Dabi, menka ho.”+ 18 Na esiane sɛ na awɔw wom nti, nkoa ne awɛmfo no de gyabiriw+ sɔɔ ogya gyinagyinaa ho toe. Ná Petro nso gyina wɔn nkyɛn reto ogya no bi. 19 Afei ɔsɔfo panyin no bisaa Yesu asɛm faa n’asuafo ne ne nkyerɛkyerɛ ho. 20 Yesu buaa no sɛ: “Mekasa kyerɛɛ wiase no wɔ baguam. Mekyerɛkyerɛe daa wɔ hyiadan mu ne asɔrefie,+ baabi a Yudafo nyinaa hyia; na manka biribiara wɔ kokoam. 21 Adɛn nti na wubisa me? Bisa wɔn a wɔtee nea meka kyerɛɛ wɔn no. Hwɛ! Eyinom nim nea mekae.” 22 Ɔkaa saa no, awɛmfo no mu biako a na ogyina hɔ bɔɔ Yesu asom+ kae sɛ: “Saa na ɛsɛ sɛ wubua ɔsɔfo panyin?” 23 Yesu buaa no sɛ: “Sɛ mekaa no bɔne a, di bɔne no ho adanse; na sɛ mekaa no yiye a, adɛn nti na wobɔɔ me?” 24 Afei Anas ma wɔde no kɔɔ ɔsɔfo panyin Kaiafa hɔ+ a na wɔakyekyere no. 25 Saa bere no na Simon Petro gyina hɔ reto gya. Ɛnna wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Wo nso woka n’asuafo no ho, ɛnte saa?” Ɔsan sɛ: “Dabi, menka ho.”+ 26 Afei ɔsɔfo panyin no akoa biako a ne busuani na Petro twaa n’aso+ no kae sɛ: “Mihui sɛ woka ne ho wɔ turom hɔ, ɛnte saa?” 27 Nanso Petro san bio sɛ ɛnte saa, na ntɛm ara na akokɔ bɔnee.+ 28 Afei wɔde Yesu fii Kaiafa hɔ kɔɔ amrado aban mu.+ Na ɛyɛ anɔpatutuutu. Nanso wɔn ankasa ankɔ amrado aban no mu sɛnea ɛbɛyɛ na wɔn ho ngu fĩ+ na wɔatumi adi twam no bi. 29 Ɛnna Pilato fii adi baa wɔn nkyɛn, na obisae sɛ: “Sobo bɛn na mode bɔ onipa yi?”+ 30 Wobua see no sɛ: “Sɛ onipa yi nyɛ ɔbɔnefo a, anka yɛamfa no ammrɛ wo.” 31 Ɛnna Pilato ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mo ankasa momfa no nkobu no atɛn sɛnea mo mmara te.”+ Yudafo no ka kyerɛɛ no sɛ: “Mmara mma kwan sɛ yekum obiara.”+ 32 Na eyi bɛma Yesu asɛm a ɔka de kyerɛɛ owu a etwa sɛ owu no aba mu.+ 33 Enti Pilato kɔɔ amrado no aban mu hɔ bio, na ɔfrɛɛ Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Wone Yudafo hene no anaa?”+ 34 Yesu buae sɛ: “W’ankasa na woabɔ wo tirim reka eyi anaa afoforo na ɛkaa me ho asɛm kyerɛɛ wo?”+ 35 Pilato buae sɛ: “Menyɛ Yudani, anaa meyɛ bi? W’ankasa wo manfo ne asɔfo mpanyin no na wɔde wo brɛɛ me.+ Ɛdɛn na woyɛe?” 36 Yesu buae sɛ:+ “M’ahenni mfi wiase.+ Sɛ m’ahenni fi wiase a, anka m’asomfo bɛko+ na wɔamfa me amma Yudafo no. Nanso sɛnea ɛte no, m’ahenni mfi ha.” 37 Ɛnna Pilato bisaa no sɛ: “Ɛnde na woyɛ ɔhene?” Yesu buae sɛ: “W’ankasa na woreka sɛ meyɛ ɔhene.+ Eyi nti na wɔwoo me, na eyi nti na mebaa wiase, sɛ merebedi nokware no ho adanse.+ Obiara a ɔwɔ nokware+ no afã no tie me nne.”+ 38 Pilato bisaa no sɛ: “Dɛn ne nokware?” Na ɔkaa eyi no, ɔsan fii adi kɔɔ Yudafo no hɔ kɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Minhu mfomso biara wɔ ne ho.+ 39 Bio nso, mowɔ amanne sɛ twam du a migyaa onipa biako ma mo.+ Enti mopɛ sɛ migyaa Yudafo hene no ma mo anaa?” 40 Wɔteɛɛm bio kae sɛ: “Ɛnyɛ oyi, na mmom Baraba!” Ná Baraba yɛ odwowtwafo.+